Imehlo le-Hawk luhlobo lwe-opaque eluhlaza okwahlukeneyo ye-microcrystalline quartz - ividiyo
tags Iliso le-Hawk, Quartz
Thenga iso le-hawk yendalo kwivenkile yethu
Imehlo le-Hawk luhlobo oluthile lwelitye elimnyama oluhlaza oluhlaza okwahlukileyo kwe-quartz ye-microcrystalline. Sisimbiwa esiguqukayo siye kwenye iminerals emva kwexesha. Yayiqale ibe yingca kwaye emva koko “yenziwa fosil” kwi-quartz. ICrocidolite sisimbiwa esenziwe ngemisonto eluhlaza okwesibhakabhaka yosapho lwe-riebeckite yintsholongwane ye-amphibole silises. Utshintsho kwelitye liqala njengoko i-quartz ithe chu ngokuthe ngcembe phakathi kweentsinga ze-crocidolite.
Eli litye lidume ngokuncokola kwalo. Ijongeka ngathi iliso le-hawk. Inxulumene ne Iliso le tiger kwaye pietersiteZombini zibonisa incoko efanayo. iliso Tiger ngayo yenziwe ngokwenene yimodeli enentsimbi ephezulu.
Sika, unyango kwaye ulingise
Amatye anqabileyo e-Hawk aqhelekile angaxutywanga okanye awaphuculwa nangayiphi na indlela.
Iimpawu eziqhelekileyo zinikezwa i-cabochon cut for the best of their display. Amatye alubomvu aveliswa ngonyango olushushu. Amathambo amnyama afakwe ngokukhawuleza ukuphucula umbala usebenzisa i-nitric acid yonyango.
Iglasi ye-fiber optic yento yokulinganisa yinto eqhelekileyo yokulinganisa iso leso, kwaye iveliswa ngemibala eyahlukeneyo. Iliso likaTiger liza ngokuyintloko livela eMzantsi Afrika nakwimpuma yeAsia.
I-quartz ye-microcrystalline yi-aggregates yeekristale Quartz ebonakalayo kuphela phantsi kobukhulu obuphakamileyo. Iintlobo ze-cryptocrystalline ziyinto edlulayo okanye ubukhulu becala, ngelixa iintlobo ezibonakala ngokucacileyo zithanda ukuba zi-macrocrystalline. I-Chalcedony yindawo ye-cryptocrystalline ye-silica equlathe i-intergrowths entle ye-quartz zombini, kunye ne-polymorph polanorphan yakhe ye-monoclinic. Olunye uhlobo lwamatye anqabileyo e-quartz, okanye amatye ahlanganisiweyo kubandakanya i-quartz, ahlala ebandakanya amaqela ahlukileyo okanye iipateni zombala, zi ngeerubhi, carnelian okanye isard, ebherilo, heliotrope, yaye leyaspisi.
Intsingiselo yeliso le-Hawk
Njengomtsalane othandekayo, eli litye livunywa njengelitye elinamandla lomlingo elakha isikhuseli esijikeleze ityhubhu ukuphepha izisongelo zobomi. Yaziwa kukwenza mhle umphefumlo, izisa ulwazi kunye nokucaca kwiingcinga ukubona inyani yobomi.
Imehlo le-Hawk, evela eMzantsi Afrika
I-Koi quartz yentlanzi
tags Intlanzi yeKoyi, Quartz
tags UMarcasite, Quartz
I-quartz yegolide e-quilz ene-hematite
tags egolide, IHematite, Quartz, Ulungiswe
tags IGilalite, Quartz
Ukuhanjiswa simahla kokuhanjiswa kwawo nawuphina umyalelo we-50.00 yeedola ubuncinci kwivenkile yethu
I-GEMIC Co., Ltd. / i-GEMIC Laboratory Co., Ltd. © Copyright 2014-2020, Gem.Iziqinisekiso